Naya course » ‘लक डाउन’ भनेको के हो ? ‘लक डाउन’ भनेको के हो ? – Naya course
विश्वमा फैलिरहेको काभिड–१९ ९कोरोना भाइरस० का कारण विश्वका धेरै देशहरु यतिबेला लक डाउन गरिएको अवस्थामा छन । अन्य देशमा नागरिकले लक डाउन भोगिरहेका छन । तर नेपालको सन्दर्भमा अहिलेसम्म लक डाउन नगरिएको अवस्थामा स्थिती सामान्य छ । तर सरकारको पछिल्लो तयारी अनुसार नेपालमा पनि अव लक डाउन गरिने सम्भावना बलियो छ । विश्वका सयौं मुलुकमा महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसविरुद्ध तयारीका रूपमा सरकारले गर्ने एउटा निर्णय हो ‘लकडाउन’ । यसमा आम सर्वसाधारणले धेरै चिन्ता लिन जरुरी छैन । सरकारले संक्रमणवाट जोगिन सर्वसाधारणलाई घरमै बस्न बाध्य पार्ने प्रकृयाका रुपमा यसलाई बुझ्न सकिन्छ । यसको अर्थ ‘लकडाउन’ भएको बेला कर्फ्यु लागेको बेला झैं घरवाट निस्कनै नपाइने हैन । कुनै निश्चित समयको लागी निश्चित ठाँउमा गरिने सार्वजनिक रोक नै लक डाउन हो ।
स्कुल, कलेज, डान्सबार, सिनेमा हल, तत्कालका लागि स्थगित भइसकेका छन् ।सार्वजनिक यतायतमा पनि सुरक्षा अपनाइएको छ । यस्तो अवस्थामा दैनिक खानपानका लागि आवश्यक बस्तुको जोहो गर्नु उत्तम हुन्छ । तर, हाहाकार हुने भयो भन्दै महिनौलाई पुग्ने खाद्यान्ह जोहो गर्नु जरुरी छैन ।